कति वर्ष देखि ‘यौ’ न कौतुहलता हुन्छ ! कुन उमेरका युवतीमा ‘यौ’,न चाहना बढी हुन्छ ? – Tufan Media News
कति वर्ष देखि ‘यौ’ न कौतुहलता हुन्छ ! कुन उमेरका युवतीमा ‘यौ’,न चाहना बढी हुन्छ ?
२६ असार २०७८, शनिबार २३:०७
यौ’नावस्थाका महिलाहरु शारीरिक रुपमा आकर्षक हुन्छन् । बयस्क हुँदा उनीहरुको शरीरको बनावट वा अंगमा केही न केही परिवर्तन देखिन्छ । बाह्य वा भित्र प्रजनन् अंगमा बृद्धि भएको हुन्छ ।प्राय युवतीहरुमा १६–१७ बर्षको हुँदा देखि नै स७ म्भोगमा कौतुहलता आएपनि २८ बर्षको उमेरलाई से७ क्सी उमेर भनिन्छ ।
ब्रिटेनमा गरिएकोएक सर्वेक्षणका अनुसार महिलाको स्वस्थ्य शरीर र यौ७ न मामलामा सक्रिय रहने उमेर २८ बर्षको बताइएको छ । एक स्वास्थ्य कम्पनीले गरेको सर्वेक्षणमा २ हजार महिलालाई आफूलाई से७ क्सी भएको कुन उमेरमा अनुभव भयो भनेर सोधिएको थियो ।
उक्त सर्वेको नतिजा ब्रिटेनको अखवार डेली मेलमा प्रकाशित भएको थियो । जसका अनुसार अधिकांश महिलाले २८ बर्षको उमेरमा आफूलाई सेक्सप्रति बढी रुचि र आफू से७ क्सी शरीर भएको बताएका थिए । उनीहरुले यो उमेरमा आफू सबैभन्दा बढी सन्तुष्टि र खुशी मिलेको बताएका थिए ।
त्यसैगरी ३२ बर्ष उमेरलाई महिलाले परिवार प्रतिको जिम्मेवारी र आफन्त प्रतिको सहयोगिका रुपमा लिएको बताएका थिए । उक्त सर्वेक्षणमा फरक उमेर समुहका महिलालाई प्रश्न सोधिएको थियो ।उनीहरु मध्ये लगभग २३ प्रतिशत महिलाले आफ्नो आँखा, २० प्रतिशतले स्त७ न र १३ प्रतिशतले दिमागलाई आफ्नो आकर्षणको केन्द्र हो भनेका थिए ।दुई हजार महिलालाई सोधिएको अर्को प्रश्न यदि आफ्नो अंग मध्ये कुन अंग परिवर्तन गर्न चाहाना छ भनेर सोध्दा ४१ प्रतिशत महिलाले सुडौल तिघ्राको चाहना राखेका थिए ।–एजेन्सी